China JKY75 / 65EIII IV-4.0 Agụụ Extruder emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Ihe nlere a bu ihe eji eme ihe karie brik ma obu bupu extrusion. Ma ọ bụ ọgbọ ọhụrụ nke ngwa ọrụ dị arọ na extrusion plastik siri ike. Nke kwesịrị ekwesị maka akụrụngwa nke ewu n'efu, nkwata, ụrọ, ala, apịtị, shale, kol, ash, gangue na wdg
Igwe a mejupụtara njigide, onye na-eweghachi ya, nke nwere okpukpu abụọ nke na-eme ka extrusion na-eme mkpesa, mgbatị na-agbatị ala, usoro nkwụsị ọkụ na ihe ndị ọzọ. A na-ahazi usoro elu na ala n'ụdị "T", a na-ahazi usoro mgbapụta agụụ iche iche site na isi engine ma jikọọ ya na pipeline akara. Onye na-eweghachi igwe a na-eji gearbox pụrụ iche maka elu ezé siri ike, nke na-eme ka ikike kọntaktị nke ezé ezé dịkwuo mma ma mee ka ọrụ ọrụ nke gearbox dịkwuo ogologo. Ogwe osisi bụ isi na-agbaso usoro ihe na-ese n'elu mmiri, nke na-emeri ihe na-agbanwe agbanwe n'oge ọrụ.
Principlekpụrụ ọrụ: A na-eji usoro 160 / 200kW na-arụ ọrụ nke extruder, na-akwọ ụgbọala, ma na-ebugharị na ntanetị na-agwakọta site na onye na-agbanwe ihe pụrụ iche iji gbanwee ọsọ iji mezue ịgwakọta, ịgbanye na mgbutu nke apịtị; mgbe ahụ ọ na-abanye na agụụ agụụ ma gafere site agụụ mgbapụta, ikuku na-adọrọ pụọ, na apịtị na-enwe nsogbu site apịtị pịa ka ala-ogbo auger. A na - eji igwe 400 / 450kW mee ka ala ahụ rụọ ọrụ iji kpoo njide pneumatic, nke a na - ebute site na isi osisi site na onye na - ewepu ezé siri ike, ma bụrụ nke a na - agbanye ya ma na - agbatị ya na conical isi na nozulu.
Ngwaahịa Ikpeazụ Brik siri ike / Oghere, Mpeepe brik
NJJ75 / 65EIV
Elinyefe Oké Osimiri Port Shanghai, China
Oge Mbuga Ozi Bọchị 30
Okwu Ahịa EXW, FOB, DAF, CFR, CIF
Mentkwụ Tergwọ Okwu T / T, L / C, D / P, Western Union, PayPal
Usoro Mbukota Dampproof, Dustproof, Quakeproof
Asambodo Verlọ ọrụ Veritas, CE, ISO9001, OHSAS18001
Akwụkwọ nke sitere China
Nke gara aga: JKY80 / 70-4.0 Agụụ Extruder
Osote: YASKAWA Robot Brick Stacking